१०६ नम्बर टाइगर - खबरम्यागजिन
Homeमनोरञ्जन१०६ नम्बर टाइगर
Jodhpur: Film actress Actor Salaman Khan arrive Jodhpur airport to appear in the chief judicial magistrate court in the 1998 Blackbuck hunting case, in Jodhpur, Rajasthan on Wednesday 04 April 2018 Photo by. Mohammed Sharif.no.09828033939
सन् १९९८ मा कालो हरिण शिकार गरेको मुद्दामा अदालतले सलमान खानलाई पाँच वर्षको सजाय सुनायो । त्यसो त उनले यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्छन्, पहिलो दिन चाहिँ उनले जोधपुरस्थित केन्द्रीय जेलमा आइतबारको रात कटाउने भएका छन् ।
जोधपुरको यो जेलमा सलमान गएको पहिलो पटक भने होइन । ११ वर्षअघि पनि उनी यही जेलमा पुगेका थिए ।
बिहिबार जेलमा पुगेपछि सलमानलाई १०६ नम्बरको ट्याग दिइयो । अर्थात्, उनी भए कैदी नम्बर १०६ । उनलाई जेलको वार्ड नम्बर २ को एउटा कोठामा एक्लै राखियो । अब उनी जेलमा आसाराम बापुका छिमेकी भएका छन् । आफूलाई आध्यात्मिक गुरु मान्ने आसाराम सन् २०१३ मा नाबालिग यौन उत्पिडन मुद्दामा जेलमा पुगेका हुन् । जेलमा अन्य कुख्यात ग्याङ्स्टर अपराधि पनि छन् । त्यसैले सलमानको कोठालाई विशेष सुरक्षा दिइएको छ । जेलभित्र नै सलमानको मेडिकल जाँच गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
सन् २००६ मा पाँच वर्षको सजाय सुनाएपछि नै सलमान ६ दिनका लागि जोधपुर जेलमा बसेका थिए ।
त्यति बेला जेलमा निकै गर्मी भएको गुनासो उनको थियो । रिहा हुँदा उनले वाचा गरेका थिए– जेलको सबै कोठामा म कुलर लगाइदिन्छु ।
तर, मुम्बई पुगेपछि उनले यो वाचा बिर्सिए ।
बैष्णोइ समुदाय हर्षित
जेल सजाय भएपछि बैष्णोइ समुदाय भने खुशी भएको छ । बीस वर्षअघि कृष्णसार मारेको अभियोगमा जोधपुर अदालतले सलमान खानलाई रु १० हजार जरिवाना सहित ५ वर्ष जेल सजायपछि बैष्णोइ समुदाय खुशी भएको छ ।
सलमान खान जेल गए भने बलिउडलाई करोडौंको नोक्सान हुनेछ ।
अभिनेता सलमान खानलार्इ ५ वर्षकाे जेल सजाय
१९९९ मा आएको फिल्म ‘हम साथ–साथ हैं’को शुटिङ अवधिमा कालो हरिण मारेको आरोपमा सलमान दोषी करार भएका हुन् । उनै सलमानमाथि बलिउडले करीब ४ सय करोड दाउमा लगाएको छ । यदि सलमानलाई ५ वर्षको जेल सजाय भयो भने उनकै कारण बलिउडले यो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।
यतिबेला सलमान खानको फिल्मल रेस–३ शुटिङ चलिरहेको छ । सलमान खानको मुख्य रोल रहेको उक्त फिल्मको बजेट १ सय ५० करोड हो । यो फिल्मको शुटिङ अझैसम्म पुरा भइसकेको छैन । सलमानले सजाय भोग्नुपरेको खण्डमा यो प्रोजेक्ट रोकिने निश्चित जस्तै छ । साथै उत्पादकको मोटै रकम फस्ने देखिन्छ ।
दबंग– ३ को बजेट १०० करोड
दबंग सिरिजको तेस्रो भाग दबंग–३ को शुटिङ पनि चाँडै सुरु हुँदैछ । यो फिल्मको दुबै सिरिजमा सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हा देखिएका थिए । यस्तै तेस्रो भागमा पनि सलमान खान नै देखिनेछन् । यसको अनुमानित बजेट १०० करोड रहेको छ ।
कालो हरिण मारेको मुद्दामा सलमान दोषी ठहर
थुप्रै फिल्मको प्रि–प्रोडक्शन
फिल्म ट्रेड समीक्षक अमोद मेहराको भनाइ अनुसार रेस–३ बाहेक उनको बाँकी फिल्म दबंग–३, किक–२, र भारतमध्य कुनैपनि फिल्मको शुटिङ सुरु भएको छैन । तर प्रि–प्रोडक्शनको काम भने सुरु भइसकेको छ । जसमा कम्तिमा पनि १०० करोड लागिसकेको छ ।
टिभी शोमा पनि दाउ
सलमान खानका फिल्म मात्र होइनन् टेलिभिजन रियालिटी शोमा पनि दाउ लागेको छ । उनको १० वर्षपछि फेरि ‘दसका दम’ चाँडै सुरु हुन जाँदैछ । यसमा सलमान खानको होस्ट रहनेछ ।
सम्बन्धः कालाे हरिण र सलमान खान
अमोद मेहरा भन्छन्– ‘दसका दम–२’ शोका लागि च्यानलले पहिले नै धेरै खर्च गरिसकेको छ । तर सलमानले जेल सजाय भोग्नुपरेको अवस्थामा फिल्म उद्योगलाई घाटा त हुन्छ नै स्वयं सलमानको करियरमा पनि नोक्सानी हुनेछ ।
यतिमात्रै होइन, सलमान खान टिभी शो ‘बिग बोस’मा होस्टको भूमिका निभाउँदै आइरहेका छन् । तर सिजन–१२ का लागि प्रि–प्रोडक्शनको पनि घोषणा भने भएको छैन ।
सलमान खान यस्ता सुपरस्टार हुन् जसमाथि बलिउड इन्डस्ट्री धेरै हदसम्म उनीमाथि निर्भर छ । यदि उनले जेल जानुपर्यो भने चाहिँ उनीमाथि गरिएको लगानी फिल्म इन्डस्ट्रीले भोग्नुपर्नेछ ।
पञ्चायत चुनाउबारे विपक्षले तोड्यो मौनता : के के भने त? (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)